CIYAARAHA CAALAMKA | Ciyaaro Online | Page 10
Home - CIYAARAHA CAALAMKA (page 10)
Kooxaha London oo ku dagaallamaya Eric Bailly
Daafaca Kooxda Man United Eric Bailly,ayaa waxaa uu dalab kala duwan ka helayaa kooxaha ka dhisan Waqooyiga iyo Galbeedka London eek ala ah Arsenal iyo Chelsea. Xiddiggan ayaa waxaa lagu wadaa in uu isaga dhaqaaqo kooxda Kubadda Cagta ee Manchester United,waxaana hadda la filayaa in uu ku biro labada kooxood middood. Xiddigga Reer Ivory Coast uma safan Kooxda Manchester tan ...
Lewandowski oo ku kacay Fal dhaqan xumo ah iyo Jawaabtii macallin Heynckes, Cajiibsanaa!!
Robert Lewandowski ayaa diiday in uu xataa Salaanta ka qaado tababare Jupp Heynckes keddib markii beddel looga saaray ciyaar ay kooxdiisu la qaadatay naadiga Cologne. Bayern Munich macallinkeeda Jupp Heynckes ayaa sheegay in uusan la yaabi doonin qaladka uu galay laacibka Robert Lewandowski kaasoo garoonka dhan isaga baxay, markii beddel loo taagay kulankii Bundesliga kooxda hanatay ay 3-1 uga badisay ...
Fernando Torres oo Shaaciyay Kooxda uu ku biirayo Atlético Keddib, waa Tuma??
Sida uu warinayo COPE, wakiillo ka socda koox Mareykanka ka dhisan ayaa ku sugan magaalada Madrid si ay ugala xaajoodaan laacibkan 34-jirka ah inuu aado Mareykanka. Mustaqbalka laacibka Fernando Torres wuxuu u muuqdaa mid tegi doona Atlantic. Kooxda Atlético Madrid weeraryahankeeda ayaa horraantii xagaagan ku dhawaaqay inuu ka tegao naadiga, lamase shaacin kooxda uu aadayo keddib Atleti.’ Wakiillo ka socda ...
Puyol oo billad ka helay Athletic Club
Daafacihii hore ee Kooxda Kubadda Cagta Barcelona ee dalka Spain,Carles Puyol ,ayaa billad ka helay Kooxda Athletic Club. Billaddan ay Kooxda bixiso Sanadkasta ayaa waxaa la siiyaa ciyaartooyda halkaas kaliya ku dhameysta Xirfaddooda kubadda Cagta sida Puyal uu ku sameeyay Barcelona oo kale. Bilbao ayaa billaddan siisay Ciyaaryanka intii ay socotay ciyaar u dhaxeysay iyaga iyo Kooxda Real Betis,waxaana billadda la ...
Sir Alex Ferguson oo Qalliin deg-deg ah oo dhinaca Maskaxda ah lagu Sameynayo
Manchester United ayaa xaqiijisay in macallinkoodii hore Sir Alex Ferguson uu marayo Qalliin dhinaca Maskaxda ah iyadoo la sheegayo in dhiig uga furmay Maskaxda Sabtigii. Ninkan oo 83-jir ayaan wax shaqo ah qaban tan iyo markii uu ka howlgabay Tababarenimada, wuxuuna qaaday 38 koob sanado 26 ah oo uu ka shaqeynayay Old Trafford. “Sir Alex Ferguson wuxuu galay Qalliin deg-deg ...
Premier League: Chelsea vs Liverpool, safafka
Kulan ciyaareed xiiso gaar ah leh ayaa dhexmaraya Kooxah Chelsea iyo Liverpool,waxaana labada kooxood middood saaran cadaadis halka tan kale ay iska raaxeysaneyso islamarkaana uusan ku furneyn wax culeys ah. Kooxda Chelsea oo lagu ciyaarayo gurigeeda ayaa u baahan guul ay ka gaarto Kooxda Liverpool si ay ugu dhawaato Tottenham oo afar dhibcood ka horreysa xalayna la garaacay. Chelsea waxaa ...
Arsenal vs Burnley, kulanka ugu dambeeya Wenger ee Arsenal,safafka
Kooxaha kubadda Cagta ee Arsenal iyo Burnley ayaa waxaa ay ku ciyaarayaan Garoonka Emirates ee Magaalada London waqooyigeeda dhaca. Waa kulanka ugu dambeeya ee Emirates uu ku ciyaaro Arsen Wenger,waxaa uu doonayaa in uu guul ku sagootiyo Garoonka EMirates ee uu 22ka sano maamulayay. Labada Kooxood waxaa ay ku dagaallamayaan Kaalinta 6aad ee kala sarreynta Horyaalka Premier League,iyada oo booska ...
Milan oo heerka 2aad u celisay Hellas Verona
Kooxda Kubadda Cagta AC Milan ee dalka Talyaaniga ayaa sabab u noqotay in Kooxda Hellas Verona ay dib ugu laabato Seire B-da Italy kaddib amrkii ay guul darro kala kulantay AC Milan,ciyaar aad u xiisa badan oo dhexmartay labada kooxood. Rossoneri,ayaa 4-1 uga badisay Kooxda Hellas Verona,waxaana natiijadaas ay AC Milan u dirtay kaalinta 6aad ee kala sarreynta horyaalka Serie A-da Italy ...
Gabdhaha Chelsea oo kuwa Arsenal ka qaaday FA-ga England
Kulan ciyaareed xiiso badan ayaa dhexmaray Gabdhaha kooxaha Chelsea iyo Arsenalk oo isugu tagay Garoonka Wemplay ee dalka Ingiriiska. Waxaa ay ciyaarayeen Ciyaarta ugu dambeysay ee FA-ga ENgland qeybta Gabdhaha ,waxaan ciyaarta ay ku dhamaatay 3-1. Ramona Bachmann,ayaa labo gool u dhalisay Chelsea,Arsenal ayaa gool ka heshay xiddigta lagu magacaabo Vivianne Miedema,laakiin Fran Kirby oo ka tirsan Chelsea ayaa arrinta soo afjartay ...
Costa oo guul soo laabasho leh ku hoggaamiyay Juventus
Weeraryahanka Kooxda Kubadda Cagta Juventus ee lagu magacaabo Douglas Costa,ayaa guul soo laabasho leh ku hoggaamiyay kooxdiisa kaddib markii uu ka caawiyay in ay garaacaan Naadiga Balogna. Bologna ayaa gool kala hormartay Juventus waxaana gool kulaad u dhaliyay Simone Verdi,iyada oo uu beddel ku soo galay Costa ku caawiyay labo gool. Qalad ay galeen Gigi Buffon iyo riixid uu sameeyay Daniele Rugani, ...
Stoke City oo noqotay kooxdii ugu horreysay ee xagaagan laabtay
Kooxda Kubadda Cagta Stoke City ee Dalka Ingiriiska ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee xilli xiyaareedkan u laabatay heerka labaad kaddib markii shalay ay guul darro kala kulantay Kooxda Crystal Palace. Stoke ayaa la hormartay goolka,waxaana ciyaarta ugu dambeyan ku dhamaatay 2-1 oo ay guusha ku gaartay Kooxda Palace iyada oo xaqiijisay in ay ka badbaadday laabadashada waxaana beddelkeeda ay ...
Yonghong Li oo isha ku haya Coppa Italia
Milkiilaha Kooxda AC Milan, Yonghong Li,ayaa sheegay in bartilmaameedkiisa uu yahay in kooxdiisu ay ku guuleysato Coppa Italia. AC Milan waxaa ay tartanka Copa Italia la ciyaari doontaa Juventus,haddii ay AC Milan ku guuleysata waxaa ay u badan tahay in uu iska bixiyo lacagaha badan ee lagu leeyahay. Yonghong Li ayaa laga yabaa in milkiiyadda AC Milan uu lumiyo Bisha October ...